Stickers Packs inounza Teregiramu ekunamatira akananga kune WhatsApp | IPhone nhau
Stickers Packs inounza Teregiramu zvimiti yakananga kuWhatsApp
Stickers ndeimwe yenhau dzakanakisa dzakasanganisirwa neWhatsApp mumakore achangopfuura, zvekuti vakonzera hunhu chaihwo mukati meiyo iOS App Store, kumisikidza kunyorera zvimisikidzo zvekushandisa pakati pekutanga kwekubudirira kuenderera mberi. Rangarira kuti mune iyi link iwe unogona kuona yedu yevhidhiyo dzidziso kuti ubatanidze zvitambi zvaunoda zvakananga muWhatsApp. Nekudaro, chii chinokonzeresa kutsamwa kukuru pakati pevashandisi veTeregiramu kusakwanisa kushandisa zvitambi zvavakajaira paWhatsApp, muchokwadi makwikwi ane akakanda zvakanyanya masitepa panguva ino. Iye zvino Teregiramu yatanga chirongwa chayo chekunamatira cheWhatsApp uye unogona kudhawunirodha pano mahara.
Iko kukumbira kunodaidzwa 10 Sticker Packs yeWhatsApp uye chinhu chinonyanya kufarira ndechekuti musimudziri ndiye Teregiramu Mutumwa LLP pachayo, saka tinofungidzira kuti inzira isinganzwisisike iyo yavanofanira kusimudzira yavo yega mameseji sevhisi, inoshanda zvakanyanya, inobatsira uye pamusoro pezvese zvinoshanda. Iko kunyorera kuri kugamuchirwa kwazvo nevashandisi vakaipa 4,7 nyeredzi kubva pane zvishanu zvinogoneka mukati mekushandisa chitoro chekambani yeCupertino.
Kune chikamu chayo, iko kunyorera kunoda iOS 8.0 kana vhezheni yepamusoro kuti imhanye, uye zviripachena inhoroondo yeWhatsApp account pafoni kwatichaisa pasuru. Iyo inorema chete 30,5 MB uye zvinoenderana neTeregiramu email yekubata yakavhurika kune chero mugadziri uyo anoda kutora mukana wepuratifomu yavo kuisa zvitambi zvitsva zvakananga paWhatsApp nekuda kwavo. Iyo yemahara zvachose uye haina zvigadzirwa zvakabatanidzwa kana chero mhando yemiganhu, unofanira kungobaya pa "+" wobva wawedzera rako raunofarira pasuru kubva pane aripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Stickers Packs inounza Teregiramu zvimiti yakananga kuWhatsApp
uye pane chero munhu anoziva kusunungura?
Ndiri kutsvaga nzira yekugadzira tsika kana zvimiti zvetsika, ini ndatoziva kuburikidza neiyo iPhone, Mac kana PC, asi handisi kuwana nzira.
Nhasi WhatsApp yakagadziridzwa ichiti iwe unogona kugadzira chinamirwa patsika paiyi link: whatsapp.com/stickers asi hazvishande.
Dzidziso dzese dzandakaona ndedze Android, kana kuitira kuti ive yeIphone ivo vanongowedzera zvimiti zvakagadzirwa.
Unogona kundipa ruoko nenyaya iyi?
Spotify inogadziridzwa nekuwedzera iyo yepamutemo app paApple Watch
Isu tatova neiyo iFixit mifananidzo yeiyo nyowani iPad Pro